Articles – Page4– FGA Tulsa
Kum 1946 Easter Sunday pen manghilh ngei nawn keining. Kum 14 ka pha a, ka nau nu Ocy kum 12… more
အိမ်ထောင်မိသားစုမှစ၍ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ၊ အသင်းတော်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍ အသီးသီးတွင် တာဝန်ရှိသူများသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အာဏာထားတတ်ကြစမြဲ ဖြစ်သည်။ ထိုအာဏာကို မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုတတ်ပါက အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်သကဲ့သို့၊ မှားယွင်းစွာ သုံးစွဲမိပါက အာဏာအလွဲသုံးစားသည်ဟု သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ထိုနည်းတူစွာ ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များသည်လည်း… more
Dotna: “Jesu pen kua ahi hiam?” Dawnna: Jesu pen kua ahi hiam? “Pasian omahi hiam?” cih dotna tawh a… more
ANTUNG GAM TUNG DING KUATE HIAM? (Mt.7:21-23) Vantung gamatung ding kuate ahi tam? Tuiphumte maw, AGte maw, RCte… more
Kum 1900 kiimaUnited Statesami hau minthang An- drew Carnegie in tua hun laiin mihau (millionaire) bekbek… more
Lungsim ngaihsutna maan pen kumpi David in zongakisapna leh manphatna theician mahmah hi ding hi, “Pasian aw, keima… more
NUNTAK MANPHAZAW TAWH L AW H C I N N A KHEN – I : LAWHCINNA KIPATNA 2. LAWHCINNA A… more
📖 “ငြိုငြင်သောသူ၊ နာကြဉ်းခြင်း ဝေဒနာနှင့်အကျွမ်းဝင်သောသူ ဖြစ်၏။ ထိုသူသည် ငါတို့အနာရောဂါဝေဒနာများကို ယူတင် ဆောင်ရွက်လေ၏” (ဟေရှာ ၅၃:၃-၄) ✅ ဘုရားသခင်ဟာ မိမိလူတို့၏ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းများကို နှစ်သိမ့်သောသူ၊ စိတ်နာကျင်မှုများကို ကုသပေးတဲ့အရှင် ဖြစ်တယ်။ ✅ ဘုရားသခင်ဟာ မိမ်ိသားသမီးများ၏ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်၍ ကိုယ်ခန္ဓာကိုကျန်းမာစေရုံသာမက စိတ်နှလုံးကိုလည်း… more
“Keimah in thawhkikna le nuntakna ka hi hi. Kei hong umteasih hangin nungta kik ding hi” (Jn.11:25). Hih… more
NUNTAK MANPHAZAW TAWH LAWHCINNA KHEN-I:LAWHCINNA KIPATNA 1. A MANPHA LAWHCINNA Lawhcinna penalawhcingsakte tawh kizui-in kibang kim lo hi.… more
Location: 7401 S Memorial Dr, Tulsa, OK 74133
Sunday, 8, Dec